FAMPAHALALANA SY SARY AMERIKANA MASTIFF AMERIKANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary amerikana mastiff amerikana
Duke ohatra tsara amin'ny lehilahy amerikana Mastiff 18 volana miaraka amina palitao.
tariby volo parson russell terrier
Ny American Mastiff dia manana vava maina kokoa noho ny Mastiff hafa. Ny vava maina kokoa dia noho ny fihanaky ny English Mastiff miaraka amin'i Anatolian Mastiff, izay nitranga tany am-piandohan'ny fivoaran'ny karazany. Alika lehibe sy goavambe ary matanjaka ny American Mastiff. Ny loha dia malalaka, mavesatra ary mahitsizoro endrika. Ny maso dia mavomavo loko, ny mainty no tsara kokoa. Boribory ny sofina ary apetaka ambony loha. Ny molotra dia salantsalany antonony ary mifanaraka tsara amin'ny loha, izay misy sarontava mainty. Mainty ny orona. Manana manaikitra hety izy io. Mahery ny hatoka ary arched kely. Ny tratra dia lalina, malalaka ary boribory tsara, midina amin'ny haavon'ny kiho. Ny taolan-tehezana dia mipoitra tsara ary miitatra tsara aoriana. Ny lamosina dia mahitsy, hozatra ary matanjaka, misy valahana tsara hozatra sy somary arched. Ny forelegs dia matanjaka, mahitsy ary milamina tsara. Ny tongotra aoriana dia malalaka sy mifanitsy. Ny tongotra dia lehibe, miendrika endrika ary matevina miaraka amin'ny rantsantongony. Matetika teraka ny alika maizina ary mihamazava rehefa mihalehibe izy ireo, ny sasany lasa maivana be noho ny taonany iray mitazona volo mainty. Ny loko dia volom-borona, apricot ary brindle. Fanamarihana fotsy azo ekena amin'ny tongotra, tratra ary saoka / orona. Toetra: haja fa tsy fahanginana mangina, milamina, be fitiavana ary mahatoky. Miaro, fa tsy mahery setra.
Ny Amerikanina Mastiff dia tia ankizy ary natokana ho an'ny fianakaviany tanteraka. Tsy mahery setra izy io raha tsy amin'ireo tranga ireo rehefa tandindomin-doza ny ankohonany, indrindra ny ankizy. Amin'ireny fotoana ireny dia lasa mpiaro be herim-po izy. Ny American Mastiff dia hendry, tsara fanahy ary malemy paika, manam-paharetana sy mahatakatra, be fitiavana amin'ny olony, tsy saro-kenatra na ratsy toetra. Tsy mivadika sy mahafoy tena izy io. Satria ireo alika ireo dia karazana Mastiff ary maniry ho lehibe dia lehibe, io karazany io dia tsy tokony hiaraka amin'ny tompona mahay mampiseho fampisehoana ihany. fitarihana matanjaka. Ny tanjona amin'ny fiofanana alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo. Ny fonosana iray manontolo dia miasa eo ambanin'ny tsipika mpitondra tokana ary voafaritra mazava tsara ary apetraka ny fitsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Hahavony: 28 - 36 santimetatra (65 - 91 cm)
Milanja: Lehilahy 160 ka hatramin'ny 200 pounds (72 - 90 kg) Vehivavy 140 - 180 pounds (63 - 81 kg)
Ny Amerikanina Mastiff dia mazàna ho alika salama sy falifaly miaraka amin'ny tranga vitsy an'isa momba ny olana ara-pahasalamana hitanao amin'ny karazany lehibe hafa.
Ny Amerikanina Mastiff dia tsara ihany ao amin'ny trano misy fanazaran-tena isan'andro, na ny mihazakazaka amin'ny tokotanin'ny fefy. Rehefa mihalehibe izy ireo dia manjary kamo kely. Tsy miasa intsony izy ireo ao anaty trano ('ovy fandriana') ary misy tokontany kely.
Mastiff dia mirona ho kamo saingy hihazona ho tsara sy falifaly kokoa raha omena fanatanjahan-tena matetika. Toy ny alika rehetra, tokony horaisina ny Mastiff Amerikanina dia an-tongotra tsy tapaka isan'andro manampy amin'ny famoahana ny heriny ara-tsaina sy ara-batana. Voajanahary alika ny mandeha. Tokony halefa imasom-bahoaka foana izy ireo.
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Borosio amin'ny borosy mafy volo ary esory amin'ny tapa-kazo na chamois mba hahavitana mamirapiratra. Mandro sy shampoo maina rehefa ilaina izany. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Namboarin'i Fredericka Wagner avy any Piketon, OH, tao amin'ny Flying W Farms tamin'ny fiampitana ny Mastiff anglisy niaraka tamin'ny Mastiff Anatolianina. Ireo alika kely izay vokatr'izany dia nanana tsipika malefaka kokoa sy hentitra kokoa ary tsy nilatsaka toy ny fambolena Mastiff antonony avy eo nitandrina ny vavany maina.
'Bean no Amerikanina Mastiff antsika. 14 herinandro izy ary tena hendry. Tena mora izy lamasinina poti . Herinandro fotsiny no nahalalany azy. '
'Bean dia milalao rehefa te-ho izy nefa tia matory mihoatra ny zava-drehetra, mety ho te hihinana kely kokoa izy. Ny fampiasany dia ny fihazakazahana miakatra sy midina amin'ny tohatra aorian'ny alika 2 hafa. '
'Mandà ny handeha hivezivezy any ivelany i Bean raha misy oram-panala amin'ny tany. Nianatra izy 'mipetraha' ary 'mihozongozona' haingana be, na dia hianatra zavatra ho fitsaboana tsara aza izy. Tena be fitiavana sy be fitiavana izy. Tokony hametraka eo am-pofoanao na eo akaikinao izy, raha mbola manao na inona na inona amin'ny lalao alika na torimaso. 7 lbs izy taloha fa izay toa tsy latsaky ny herinandro dia 15 lbs. Tsy afaka miandry azy ho tonga olon-dehibe izy, fa tia azy andro puppy . '
Bean amin'ny maha alika kely
Hijery ohatra misimisy momba ny American Mastiff
American Mastiff sary 1
American Mastiff sary 2
American Mastiff sary 3
fivontosan'ny sela marobe amin'ny boxer
afaka miteraka alika amin'ny coyote ve ny alika?
mpiandry alemanina mifangaro amin'ny husky alaskan
Newfoundland border collie mix alika kely alika
1 taona shiba inu